Fitoriana ireo depiote eny amin’ ny HCC : Filam-baniny madinika sisa ny an’ireo depiote 73 -
AccueilRaharaham-pirenenaFitoriana ireo depiote eny amin’ ny HCC : Filam-baniny madinika sisa ny an’ireo depiote 73
Dia mitohy ny asa fanakorontanana saim-bahoaka notanterahin’ireo eo anivon’ ny solombavambahoaka 73, izay nametraka fitoriana fialan’ireo solombavambahoaka namany, izay nolazain’izy ireo fa nivadika tamin’ny antoko nahalany azy. Lohalaharana tamin’io fitoriana io ny TIM sy ny MAPAR, izay nitory ireo solombavambahoaka miisa 13 izay ny roa amin’ireo dia depiote tiako Madagasikara izay nolazain’izy ireo fa namadika ny antoko nahalany. Mazava tokoa ny voalazan’ny andininy faha-72. “ Mandritra ny fe-potoana iasany, ny solombavambahoaka dia tsy afaka miova vondrona politika mba hiditra any amin’ny vondrona vaovao, ankoatra ny anaran’ny vondrona izay nahavoafidy azy, raha tsy izany dia haongana”. Ny mahagaga eto dia mazava ny lalàna nefa dia minia tsy mahita izany ny depiote Christine Razanamahasoa MAPAR izay mpitsara sy Felix Randriamandimbisoa avy amin’ ny TIM izay nanatitra ny fitoriana. Raha ho an’ny MAPAR manokana mantsy izao no jerena dia tsy nisy mihitsy ny fiovana anarana araka ny voalazan’io andininy faha-72, ary tsy nisy mihitsy ihany koa ny fidirana vondrona politika hafa, satria tokoa dia MAPAR ihany no misy ireo depiote 11 izay notorian’izy ireo. Dia tahaka izany ihany koa ny depiote TIM roalahy izay notoriana, izay mbola TIM ihany no iantsoana azy ireo.
Hatreto ihany koa raha natao ny fanadihadiana teo anivon’ny antenimieram-pirenena dia tsy misy mihitsy vondrona parlemantera vaovao sy hafa voarakitra, fa ireo izay teo ihany no nasiana laharana tahaka ny hoe MAPAR 1 sy 2. Midika izany fa tsy mitombina velively ny fitoriana nitondrana vahoaka izay napetrak’ireo depiote teny amin’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana teny Ambohidahy. Eto tokoa mantsy tsara ny manamarika fa raha toa misy ny fivadibadihana araka ny toetra izay nisy tao amin’ny antenimieram-pirenena dia tafiditra amin’ izany ihany koa ny vondrona parlemantera TIM , tsy tsaroan’ ireo solombavambahoaka ireo mantsy fa anisan’ny nitarika ny PMP na ny parlemantera maro an’isa manohana ny filoha ny TIM. Tamin’ izany dia nahilik’izy ireo ny MAPAR, io zava-nitranga tamin’ izany fotoana io ve noho izany dia midika fa niova vondrona parlemantera ny TIM satria niaraka tamin’ ny PMP. Moa va tsy TIM ihany izy ireo hatramin’ izao, ary moa ve ireo depiote izay torian’izy ireo mbola tsy MAPAR sy TIM ihany hatramin’izao.